ချင်းပြည်နယ်တွန်းဇံမြို့နယ်ထဲက တွီးဗျဲာလ်ဇန်ကျေးရွာ မှာ သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ခံခဲ့ ရတဲ့ ဆရာမဒေါ်ဒိန်လွန်းမာန် ရဲ့ အဖြစ်အမှန်အစအဆုံးပါ… – Myanmar News Groups
ချင်းပြည်နယ်တွန်းဇံမြို့နယ်ထဲက တွီးဗျဲာလ်ဇန်ကျေးရွာ မှာ သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ခံခဲ့ ရတဲ့ ဆရာမဒေါ်ဒိန်လွန်းမာန် ရဲ့ အဖြစ်အမှန်အစအဆုံးပါ…
ချင်းပြည်နယ်တွန်းဇံမြို့နယ်ထဲက တွီးဗျဲာလ်ဇန်ကျေးရွာဆိုတာ အိမ်ခြေ ၁၀အိမ်ရှိပြီးတော့လူဦးရေစုစုပေါင်း၆၀လောက်ရှိတဲ့ရွာလေးပါ ကျောင်းသားစုစုပေါင်းမှ ၇ယောက်ပဲရှိတာ အသတ်ခံရတဲ့ ဆရာမဒေါ်ဒိန်လွန်းမာန်ဟာ PPTT ၃/၂၀၁၆ လှည်းကူးပညာရေးကောလိပ် ကျောင်းဆင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် … ။
အမက.တွီးဗျဲာလ်ဇန်ကို ၂၀၁၇မှာ first posting နဲ့တာဝန်ကျတာပါ …. ။ တောင်ပေါ်ဒေသဆိုတော့ တစ်နှစ်နေပြီး အပြောင်းတင်လို့ရပေမယ့် ကလေးတွေအပေါ် သံယောဇဉ်ကြီးလွန်းပြီးတော့ သူအပါတခြားဆရာမလည်းအပြောင်းမတင်ကြဘူး ခက်ခဲပေမယ့်ပျော်ကြတယ်လို့ ဆရာမဒေါ်ဒိန်လွန်းမာန် နဲ့တာဝန်ကျနေတဲ့ဆရာမကပြောတယ် …. ။
ရွာကလည်းအိမ်ခြေနည်းတော့ အားလုံးနဲ့မိသားစုလိုဖြစ်နေကြတာမို့ခုကျောင်းဖွင့်ပြီးမှ အပြောင်းခေါ်တာတောင် မလျှောက်ဖြစ်ကြဘူး …. ။ အဲ့ရွာက အိန္ဒိယပြည်နဲ့၄မိုင်လောက်ပဲ ဝေးတာ ရွာထဲကနေလည်း အိန္ဒိယကို အလုပ်သွားလုပ်ကြတာပဲ နယ်စပ်ဒေသပေါ့..
ဆရာမကိုသတ်တဲ့ Binodဆိုတဲ့သူက အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ကသည်းလူမျိုး လက်ရှိတတိယအိမ်ထောင်နဲ့ပေါင်းသင်းနေပြီးတော့ အဲ့ရွာမှာနေတာ၄နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဒုတိယအိမ်ထောင်နဲ့ သမီးတစ်ယောက်ပါ အတူတူနေကြတယ်
ထုံးစံအတိုင်း မိထွေးနဲ့လင်ပါသမီးရဲ့အဆင်မပြေမှုတွေ၊ ဖခင်ကမူးလာတိုင်း သေနတ်နဲ့ပစ်သတ်မယ် ခြိမ်းခြောက်တာတွေကို ဆရာမဆီအားကိုးတကြီး ရင်ဖွင့်တယ်ဆရာမလည်းဖခင်မရှိတော့တဲ့သူ
အဲ့ကလေးမလေးကလည်း မိခင်မရှိတော့တဲ့သူဆိုတော့ ကိုယ်ချင်းစာ သနားမိတယ် ဆရာမက ဒါဆို၉မိုင်မှာ ငါ့အမေရှိတယ် အိမ်မှာမိန်းကလေးလည်းမရှိဘူး နင်ကျောင်းဆက်တက်ချင်ရင်လည်းတက်ဆိုပြီး သူ့အမေဆီ ပို့လိုက်တယ် ဆရာမအိမ်မှာ Binodရဲ့သမီးပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူး … ။
ရွာကမူလတန်းကျောင်းပဲရှိတာဆိုတော့ အလယ်တန်း တက်ရမယ့်ကလေးတွေကိုလည်း ဗမာစကားရေလည်အောင် မိဘတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ သူ့အိမ်မှာထားတာပါ ဆရာမရဲ့အမေက ကိုယ့်မိသားစုခက်ခဲနေတဲ့ကြားထဲက နင်က ကလေးတွေခေါ်ခေါ်လာသေးတယ်လို့ဆူရင် သမီးတို့အဆင်မပြေတာထက်ကို သူတို့ဘဝတွေကပိုဆိုးတယ်အမေလို့ ဖြေတယ်တဲ့လေ … ။
သတ်တဲ့သူရဲ့မကျေနပ်မှုက အဲ့တာကနေစတာလို့အနီးစပ်ဆုံးထင်ကြေးပေးကြတယ် သမီးကိုမဲလို့မရတော့ ဆရာမကိုမဲတော့တာ ရွာလူကြီးကိုတိုင်တယ် .. ။
သူ့သမီးကို ဒီဆရာမက ခေါ်သွားလို့ဆိုပြီးBinodကတိုင်ခဲ့ဖူးတယ်တဲ့ အဲ့မကျေနပ်မှုပဲ ပြဿနာ ရှိကြဖူးတယ်လို့ ကျောင်းအုပ်ကော ကျေးရွာတာဝန်ခံ‌ကပါပြောပါတယ် ဒါနဲ့ပဲဆရာမဒေါ်ဒိန်လွန်းမာန်ကိုနိုဝင်ဘာ ၁၇ရက်နေ့ည၉နာရီခွဲလောက်မှာ အိပ်ယာဝင်ပြီးမှသေနတ်နဲ့ပစ်သတ်ခဲ့တာပါ … ။
ဆရာမနဲ့ အတူနေတဲ့ကျောင်းသားနှစ်ယောက်က ၉ပေလောက်မြင့်တဲ့ ပြတင်းပေါက်ကနေ ခုန်ချပြီး ကျေးရွာတာဝန်ခံကိုသတင်းပို့ကြတယ် … ။ ဆရာမကဖြစ်ဖြစ်ချင်းသွေးပူတုန်းမလို့နေမှာ သူ့အမေကိုဖုန်းဆက်ပြီး သူသေနတ်အပစ်ခံရကြောင်း သူ့ဒဏ်ရာတော်တော်ပြင်းကြောင်း ပြောပြီးတော့ လုံးဝစကားမပြောနိုင်တော့တာပါ … ။
ဒါနဲ့သူတို့ရွာကနေ ကျီခါးကို ထမ်းစင်နဲ့သယ်ပြီးပို့တယ် ယောက်ကျားဆိုလို့ ၆ယောက်လောက်ပဲရှိလို့ အနီးကခွေဗွမ်းရွာကိုလည်းအကူအညီတောင်းပြီး ၃နာရီလောက်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ ကျီခါးဆေးရုံကိုပို့ကြတယ် …. ။
ကျီခါးရောက်တော့ အောက်စီဂျင်တပ်ပေးလိုက်တယ် ဒီမှာပစ္စည်းအစုံမရှိတော့ တွန်းဇန်ဆေးရုံးကိုသွားပါလို့ပြောတယ် တွန်းဇန်ကိုသွားတယ် အောက်စီဂျင်ပြတ်တော့မှာမလို့ တွန်းဇန်လူငယ်တွေရဲ့ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းဆီအရင်ဝင်တယ် … ။
အဲ့မှာရောက်တော့အောက်စီဂျင်ကကုန်နေပြီ ဒါနဲ့ဆေးရုံကိုသွားတယ် ဆေးရုံရောက်တဲ့အချိန်မှာ အသက်မရှိတော့ပါဘူး … ဆရာဝန်ကပြောတယ် တကယ့်ကိုအာဂသတ္တိရှင်ပဲတဲ့ မိန်းကလေးမပြောနဲ့ ယောက်ကျားကြီးတွေတောင် အဲ့လောက်ခံနိုင်ရည်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့လေ ဆေးရုံကိုရောက်တော့ အသည်းတွေ နှလုံးတွေ အကုန်ကြေမွနေပြီ … ။
ပြောချင်တာက ဝေးလံခေါင်ဖျား တဲ့နေရာမှာတာဝန်ကျတဲ့ဆရာ၊ဆရာမတွေအတွက်ကတော့ နေထိုင်မှုမလုံခြုံမှု ဟာအဆိုးဝါးဆုံးကြုံတွေ့နေကြရတာပဲ … ။
ဒီဖြစ်ရပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီး လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေးတွေကို သွေးဆူအောင် လှုံ့ဆော်နေကြတာတွေ တစ်ချို့မီဒီယာတွေကသတင်းဆိုပြီးရော တင်နေကြတာတွေကသေဆုံးသူရဲ့သိက္ခာတင်မကဘူး ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့မိသားစုကိုပါ စကားလုံးတွေနဲ့ သတ်ရာရောက်ပါတယ် … ။။
Previous Article ကောလဟာလထွက်ရခြင်းအကြောင်းကို သီချင်းတူတူတွဲလုပ်ဖူးလို့နဲ့တူတယ်လို့ ပြောလာတဲ့ မေရီ
Next Article ထမင်းစားရင်းဖြစ်စေ ထမင်းစားပြီးဖြစ်စေ ရေသောက်တဲ့ အကျင့်ရှိရင် ဒီပို့ကို ကျော်မသွားပဲ ဖတ်ကြည့်သွားပါနော်